ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | Wuxi Qingyuan လေဆာနည်းပညာ Co. , Ltd.
Cheeron Laser (QY Laser) သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက ၀ ယ်သူများကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်အရည်အသွေးမြင့် CNC လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များဖြင့်အဆက်မပြတ် ၀ ယ်ယူခဲ့ပြီးတရုတ်၏ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Cheeron Laser (QY Laser) ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး fiber laser လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် R&D၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းကိုသာရည်စူးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာ၊ အရည်အသွေး၊ အသုံးချမှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုတို့ကိုအာရုံစိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်အဖြစ်“ ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ တိကျမှု” ကိုယူသည်။ ငါတို့သည်လည်းထုတ်ကုန်ပုံစံ ၈၀ ကျော်ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး၊ စက်တစ်မျိုးစီသည်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်တွင် ဦး ဆောင်အဆင့်သို့ရောက်ခဲ့သည်။
Cheeron Laser (QY Laser) သည် optical fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များကိုလုပ်ဆောင်သောပြည်တွင်းစက်ရုံများ၏ ၉၀% နှင့်ကွဲပြားစေသည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များကိုစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤနယ်ပယ်၌ ၁၂ နှစ်တာသည်အတွေ့အကြုံပိုရစေခဲ့သည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၇၀၀ ဝပ်မှ ၁၅၀၀၀ ဝပ်အထိဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များအတွက်သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပြီး၎င်းကိုအခြားသူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ ၁၅၀၀ ဝပ်မှ ၂၀၀၀၀ ဝပ်အထိထောက်ပံ့သည်။
3. ကုမ္ပဏီတွင်အင်ဂျင်နီယာ ၆၅ ဦး ပါ ၀ င်သော R&D အဖွဲ့ ၀ င်ရှိသည်၊ ၎င်းတို့အနက် ၁၀ ခုသည်ဖိုက်ဘာလေဆာစက်များတွင်အတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲအသစ်ဖြစ်စေသောနည်းပညာအသစ်များနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးပစ္စည်းများတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်သည်။ စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြည်တွင်းအင်ဂျင်နီယာအယောက် ၆၀ နှင့်နိုင်ငံခြားအင်ဂျင်နီယာ ၅ ဦး နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသော After-Sales Service Team ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမာခံအဖွဲ့သည်ပါရဂူဘွဲ့နှင့်ပြည်ပတွင်လေဆာအသုံးချမှုများနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများနောက်ခံရှိသူဖြစ်ပြီးလေဆာလုပ်ငန်း၌အတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိသည်။
နည်းပညာအဖွဲ့ - ငါတို့မှာပညာရှင် ၆၅ ယောက်ရှိတယ်
လေဆာ R&D အတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသောအကြီးတန်းနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ ၈ ဦး ။
စက်ရောင်း ၀ ယ်မှုနှင့်စျေးကွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကိုသေချာစေရန်အဓိကအားဖြင့်ကြိုတင်ရောင်း ၀ ယ်မှုနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသည်။
ဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စက်များအားသေချာစေရန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသောအငယ်တန်းနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ ၃၂ ဦး
ကုမ္ပဏီသည် "အရည်အသွေးဖြင့်အနိုင်ရခြင်း" ဟူသောအယူအဆကိုလိုက်နာသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှု ၈ နှစ်အကြာတွင်အရေးကြီးဆုံးအရာသည် ၀ ယ်သူများ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်နှင့်နာမည်ကောင်းရရှိရန်ဖြစ်သည်။
လိပ်စာ: No.30 Hongyue Road, Hongshan Street, New District, Wuxi, Jiangsu Province, China
©မူပိုင်ခွင့် - ၂၀၁၀-၂၀၂၀: All Rights Reserved